Naveed Khan: ဒူဘိုင်းရှိပါကစ္စတန်အကြောင်း အလုပ်အကိုင် - အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း - ခရီးသွားခြင်း Love UAE!
Naveed Khan က: ဒူဘိုင်းအတွက်ပါကစ္စတန်၏ပုံပြင် - ဤတွင်နှစ်ဦးစလုံးလက်နှင့်ဘဝကိုဖမ်းဆုပ်ဖို့ပဲ!
Naveed Khan က - လုံးဝဒူဘိုင်း!
Naveed Khan က 26th ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဧပြီလ 2008, အသကျရှငျပညာရှင်များများအတွက်ပုံမှန်နေ့က ပါကစ္စတန်နှင့်ယူအေအီးနိုင်ငံရှိပေမယ့်သူကငါ့အဘို့ဘဝ-changer ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာတစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့သည် ငါပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်များရှာဖွေရေးအတွက်ယူအေအီးမှပျံသန်းလာသောအခါ။
ငါဤမျှလောက်များစွာသောခဲ့ ငါ၏အဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. အိပ်မက်နှင့်ရည်မှန်းချက်။ ငါမျှော်လင့်ခဲ့အဲဒီမှာအလုပ်လုပ်လူအများ၏အောင်မြင်မှုပုံပြင်များစဉ်းစားတွေအများကြီးကတိထားတော်အပေါင်းတို့, မျှော်လင့်ချက်နှင့် ကတိတော်များကိုစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ဟန်.
ဒါဟာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအစဉ်အဆက်လေကြောင်းခရီးသွားခဲ့ကြောင်းဒေသခံတစ်ဦးနယ်လှည့်မဟုတ်ခဲ့ ကျွန်မတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားတိုင်းပြည်ကိုလုံးဝသွားခဲ့သည် တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားယဉ်ကျေးမှု, ထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့်ဘာသာစကားအတူ။ ဒါဟာသောကယ်ဆယ်ရေးစခန်းခဲ့သည် ဘာသာတရားအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်.
ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောအချက်ဖို့ကျွန်မကိုသတ္တိနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုပေးတျောမူ အလုပ်အမဲလိုက်ခြင်းအတွက်လာမည့်စိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ရ။ ငါညအချိန်တွင်လာဟိုးထံမှပျံသန်းနှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်သန်းခေါင်မှာဆင်းသက်ခဲ့သည်။ ဒူဘိုင်းလေဆိပ်အတွက်အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီစီးပွားရေးကိုနဲ့ငါ့ 1st အပြန်အလှန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာဆိုပါတယ်, တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်စုံတစ်ရာနိုင်ငံ၏လူနေမှုစတိုင်လာရောက်လည်ပတ်သူအနေနဲ့စိတ်ကူးရရှိရန်လိုလားပါလျှင် သူတို့ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာ, ဒူဘိုင်းလေဆိပ်ငါ့ကိုဒီအခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။
ဒါဟာအံ့မခန်းဖြစ်ခဲ့သည် တဦးတည်းအိမ်ခေါင်မိုးအောက်မှာရှာတွေ့လူများနှင့်ဘာသာစကားများဤမျှလောက်အမျိုးမျိုးကိုတွေ့မြင်ရန်။ ဤသည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးစု, ဘာသာစကားနဲ့ဘာသာတရားကနေလူတွေအတူတူငြိမ်းချမ်းရေးတှငျနထေိုငျကွညျ့ပါငါ့အိပ်မက်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါနောက်ပိုင်းမှာအားလုံးဥပဒေရှေ့မှောက်တွင်တန်းတူဖြစ်သည့်အခါဤအသာဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်နိုင်ကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယ်သူသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင် သငျသညျပညတျတရားကိုဖဲ့လျှင်သင်မလွတ်မြောက်နိုင်ပါဘူး။ လူအများ၏%5မှ 10% အပေါ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကုသမှုခံစားပါလိမ့်မည်မည်မျှရှိနေထိုင်နေကြလူတို့သည်ငါ့ထံမှကွဲပြားစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့သူတို့မှန်လျှင်ပင် ယူအေအီးလူဦးရေပင်သူတို့အတန်ငယ်ဥပဒေရှေ့မှောက်တွင်တာဝန်ခံသော်လည်း, မြို့ကြီးများတွင်နေထိုင်သောနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းဥပဒေများအောက်တွင်တင်းကြပ်စွာများမှာဖန်တီးပေးသောအနားယူနေကြသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကျောမှ လေဆိပ်ငါလေးနက်ခြင်းဖြင့်ညင်ညင်သာသာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ထမ်းများ အကြှနျုပျအဘို့ပျော်ရွှင်မှုကိုတစ်လေတိုက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ထုံးစံန်ထမ်းများအညီအမျှယဉ်ကျေးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရှေ့တန်းနှင့်တိုင်းပြည်၏အိမ်တံခါးမှာဖြစ်ကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိုသို့သောထမ်းသောလူမြိုး၏မျက်နှာကိုများမှာ ပြည်ပမှာအနေဖြင့်လာမယ့်လူများအတွက်ငါအချို့ကိစ္စကလူတစ်ဦးပျော့သွားတာကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်သေးနေကြသည်ကိုငါမြင်၏ ဝန်ထမ်းများအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာသူတို့ကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားနေသည်။
အဘယ်သို့ငါနားလည် သငျသညျလေဆိပ်တစ်ခုန်ထမ်းများနှင့်အတူမျှမျှတတဆက်ဆံလျှင် သူတို့ဆင်ခြင်ကောင်းစွာသင်ဆက်ဆံမည်, သင်မကွောကျပါလိမ့်မယ် သငျသညျမှားယွင်းတဲ့ဘာမှပြုမိကြပြီမဟုတ်ပါလျှင်ငါ့၏ဤကြေညာချက်ကိုငါ့ဆောင်းပါး၏နောက်ဆုံးအဆင့်သက်သေပြပါလိမ့်မည်။ သူတို့ကအရမ်းစေ့စေ့မိမိတို့၏တာဝန်နှင့်ကိုင်တွယ်ဖျော်ဖြေနေသောလေဆိပ်ဝန်ထမ်းပယ်ဦးထုပ် ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများအနေဖြင့်လူဦးထိုကဲ့သို့သောကြီးမားစီးဆင်းမှု အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးနှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိဘဲ။ ဒူဘိုင်းလေဆိပ်သည်တစ်ကမ္ဘာလုံး၏အလုပ်အများဆုံးလေဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်အဖြစ်နေဆဲဒီတော့ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်အားလုံးန်ထမ်းများ၏မဆုပ်မနစ်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ တခါတလေ သူတို့သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လူတွေထက်ပိုမိုအထောက်အကူဖြစ်စေများမှာ.
လေဆိပ်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကငါ့ကိုပြင်ပအစွန်းရောက်ရာသီဥတုအခွအေနေခံစားမိစေပါဘူးဒါကြောင့်အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်, အရာများသောအားဖြင့်ထိုနေ့ရက်ကာလ၌ယူအေအီးအတွက်နိုင်။ ငါသည်ငါ့အိမ်ရှင်မိသားစုများ၏ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတို့ကစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်နေသော်လည်းဒါနှောင်းပိုင်းကငါ့ကိုလက်ခံရရှိစဉ်ငါသည်သူ၏မျက်နှာမှာတစ်ခုတည်းတွန့်မမွငျနိုငျသန်းခေါင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကနေ 139 ကီလိုမီတာသွားလာခဲ့ရသည် အဘူဒါဘီဒူဘိုင်းကနေငါ့ကိုတက်ကောက်ဖို့.
ပြည်သူ့အကွာအဝေးဒါပေမယ့်လည်းအသွားအလာမသာကောင်းစွာသတိပြုမိကြသည်။ နှိုင်းယှဉ်ဘူဒါဘီ၏လမ်းများ ပိုပြီးအဆင်ပြေဒူဘိုင်းထက်ခရီးသွားလာ၎င်း၏ Non-ပိတ်ဆို့မှုကိုနှင့်စီးပွားရေးမဟုတ်သောလူနေမှုပုံစံစတဲ့မှုကြောင့်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းလုလင်ကိုရွှင်ပြလန်းဆန်းသူ၏မိသားစုနှစ်ပေါင်းအဲဒီမှာနေထိုင်နေခဲ့ပြီး, ငါ့ကိုနှုတ်ဆက်သည်။ ငါသည်သူ၏အမူအရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၏ခဲ့တာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာသဘောပေါက် ယူအေအီးယဉ်ကျေးမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု သူသညျမိမိသဘောထားကိုအတွက်ထည့်သွင်းထားတဲ့ဧည့်သည်များကုသ၏။ ညဉ့်မှုကြောင့်ပူနေ့နွေးခဲ့သည်။
ကျနော်တို့၏လမ်းများပေါ်ကျက်စားခဲ့ကြသည် အဘူဒါဘီများအတွက်မထွက်ခွာမီဒူဘိုင်း။ သူကငါရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်တဲ့ရက်ရက်ရောရောအိမ်ရှင်အဖြစ်ထွက်စားသောက်ချင်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ roaming ခဲ့သည် အခြားတိုင်းပြည်ကနေခရီးထွက် နှင့်ထုံးစံ, လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အိတ်စုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖြစ်ရပါမည်။
ကျနော်တို့ကအစားအသောက်အချက်အားဖြင့်ရပ်တန့်နှင့်အမှန်တကယ်ကျနော်တို့အဲဒီမှာစားသောအရာကိုမှတ်မိကြပါဘူး, ဒါပေမယ့်အဘယ်အရာကိုငါသတိရကအရသာကြီးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ကျောကိုငါ့အိမ်ရှင်အဖြစ်ကောင်းစွာတဲ့ဧည့်လမ်းညွှန်အခန်းကဏ္ဍသည်လမ်းတွင်သူကကျနော်တို့အနားမှာရှောက်သွားရာမှမြေမှတ်တိုင်တို့ကိုအကြောင်းပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Corniche, မောလ်များ, ဘုံဗိမာန်များနှင့်ဤမျှလောက်ရှိ၏ထင်ပေါ် ဒူဘိုင်းအကြောင်းကိုပြောပြရန် ပင်ကြောင်းရှည်လျားဝေးလံပျင်းခံရခြင်းမရှိဘဲဖုံးလွှမ်းခရီးသွားလာ။
Burj Khalifa နှင့် Burj ဒူဘိုင်း
သူပြီးဆုံးသို့မဟုတ်ပြီး၎င်း၏နောက်ဆုံးအဆင့်၌ရှိ၏ရာ Burj Khalifa (ထိုအခါ Burj ဒူဘိုင်း) အကြောင်းငါ့ကိုပြောပြသိပ်ဂုဏ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ယခုငါဒီစာရေးနေချိန်မှာသူကယူကြပြီနိုင်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက် အဘူဒါဘီမှအဓိကလမ်းမှသေးငယ်တဲ့လမ်းကြောင်းဒါပေမယ့်အစား, သူသည်ငါ့ကိုမြို့ရဲ့ညားနှင့်ဘုန်းကိုပြသနေတဲ့လမ်းလွှဲယူခဲ့ပါတယ်။ သူစဉ်ဆက်မပြတ်သူ Baba Zayd (အများအားဖြင့်သမုတ်သောသူ့ကိုခေါ်တော်မူသောရှိတ် Zayd ကိုခြီးမှမျးခံခဲ့ရသမျှသောလမ်း ပါကစ္စတန်) ။ ဤကိုးကွယ်ပေးဆောင်လျှင်အဖြစ် အလွန်ကြီးစွာသောခေါင်းဆောင်သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ကျနော်တို့အဓိကသို့ပေါင်းစည်းသည့်အခါကျွန်တော်ဒူဘိုင်းနှင့်ထွက်ခွာသည့်အခါ Shiekh Zayd လမ်း အဘူဒါဘီမှဦးဆောင်ကျွန်မမှတ်မိကြဘူးဒါပေမယ့်ဒါချောမွေ့နှင့်စီစဉ်ထားဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူယာဉ်အသွားအလာ system ကိုကြည့်ဖို့အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည် မောင်းနှင်မှုနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်အသွားအလာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေများကလိုက်နာနေသောလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ဒါလွယ်ကူပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏အိမ်ရှင်နှင့်ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ဦးယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရတဲ့ရဖို့သိပ်ခက်ခဲကြောင်းပြောပြတယ်။ သူကသူ့ကိုယ်သူတတိယကြိုးပမ်းမှု၌ရတယ်။ ဤသည်ဥပဒေများကိုတင်းကြပ်စွာပြည်နယ်အတွက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကိုဘယ်လိုပြသထားတယ်။
ဤသည်ကိုလည်းပြည်နယ်ကလူနှင့်အရည်အချင်းမပြည့်၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဂရုစိုကျကွောငျးဖျောပွင်း၏မော်တော်ယာဉ်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိမရှိယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ငါ၏အအကျိုးစီးပွားဖေါ်ပြသည်ငါအဖြစ်ကောင်းစွာသူ့ကိုမေးခွန်းတွေအများကြီးမေးခဲ့တယ်ဥပမာ, ငါတံတားနှင့်တိုင်မြင်ငါကအကြောင်းမေးလြှောကျလြှငျ, သူလျင်မြန်သောရထားသောကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးရထားလမ်းလမ်းကြောင်းအောက်မှာရဲ့ပြောတယ် Dera ဒူဘိုင်းကနေ Jebel Ali မှမကြာမီဒီအပေါ်ကို run ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ငါဘယ်လိုကြည့်ဖို့သိပ်အံ့သြလေ၏ တစ်ပြိုင်နက်တည်းပြည်နယ်အကြီးစားစီမံကိန်းများကိုလုပ်ကိုင်နေသည်။ အထင်ကရအဆောက်အ, အခြေခံအဆောက်အဦ, သင်ကအမည်နှင့်သင်ဆောက်လုပ်ရေးကိုတွေ့လိမ့်မည်အပန်းဖြေသောနေရာများ။ ဒူဘိုင်းကနေထွက်ပေါက်တွင်, ငါ၏အအိမ်ရှင်ငါ့ကိုအုန်း Jumeirah မှတာခံခဲ့ရသောလမ်းသွားပြသ, ငါကသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အခွင့်အလမ်းတယ်ဘယ်တော့မှမ။ သူက၎င်း၏ကပြောပါတယ် အလွန်အမင်းစျေးကြီးဧရိယာ။ ကျွန်ုပ်တို့အချို့အဖြစ်ကောင်းစွာငွေရှာဖို့ဖြစ်ကြောင်းတွေ့မြင်အထွေထွေလူထုများအတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောတည်ဆောက်မှုများတွေ့မြင်ဘယ်မှာ။ ဒါဟာပိုက်ဆံ generate မှပွင်ပေမယ်သင်မည်သို့အသုံးပြုရန်ကြောင့်ကိစ္စရပ်များနှင့် ယူအေအီး၏ခေါင်းဆောင်မှုကဤ ပတ်သက်. ကြက်သရေရူပါရုံကိုရှိ။ သူတို့ဟာတကယ်တော့အတွက်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကတဦးတည်းအထက်တန်းလွှာကနေငွေရှာနဲ့ Robin Hood တူသောယေဘုယျအများပြည်သူဒါပေမဲ့ဒီတွေ့ခဲ့ရပါပြီမဟုတ် J ကိုပေါ်သုံးဖြုန်းဖို့ဘယ်လိုသိကြ၏။
အပြင်ဆောက်လုပ်ရေး မှစ. , ရှုခင်းကိုလည်းထူးခြားဆန်းပြားဖြစ်ပါသည်, ညဉ့်တိတ်ဆိတ်နှင့်သဲကန္တာရအမြဲငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်သငျသညျထိုကဲ့သို့သောသောနေရာများမှာသင့်ရဲ့ဖန်တီးသူဖို့ပိုနီးစပ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဤခရီးငါ့ကိုအခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ မည်သည့်ကားတစ်စီးလျှင်မော်တော်ယာဉ်များ၏ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ၏တင်းကျပ်သောဥပဒေများရှိပါတယ်ကြောင့်ယာဉ်ဆင်း Breaking အလွန်ရှားပါး အဆိုပါမဖြစ်မနေနှစ်စဉ်ကြံ့ခိုင်ရေးစမ်းသပ်မလွန်ပါဘူး လမ်းများပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့မည်မဟုတ်ပါ, ထိုကဲ့သို့သောဥပဒေများအမြဲတမ်းလူထုကိုမဆိုခရီးသွားလာအန္တရာယ်ရှောင်ရှားရန်အဘို့အအကျိုးရှိသောဖြစ်ကြသည်။ ငါရှိနေချိန်မှာငါမကြာမီအကောင်အထည်ဖော်ခံရဖို့လမ်းသွားလမ်းလာနှင့် ပတ်သက်. ဥပဒေကြား၏။ J ကို Walker မကြာမီဒဏ်ရိုက်ခံရဖို့သွားနေကြပါတယ်။ အများပြည်သူလုံခြုံရေးအတွက်ရသေးအခြားဥပဒ။ ပညတ္တိကျမ်းကတင်းကြပ်စွာလိုက်နာပါလိမ့်မယ်အကောင်အထည်ဖော်တစ်ကြိမ်နှင့်လူများသတိထားမိကြသည်။
ပညတ်တရား၏ဤသည်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောဖြစ်ပါသည် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပြည်နယ်လုပ်ငန်းချောမွေ့လုပ်ငန်းစဉ်၏အာမခံချက်။ အကြှနျုပျ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံကိုရေးသားဖို့အများကြီးရှိသေး၏တဦးတည်းဘလော့ဂ်တွေဖုံးလွှမ်းခံရဖို့မသွားဖြစ်ပါတယ် ထိုသို့လာရန်လာမည့်ဘလော့ဂ်များ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ပါလိမ့်မည်။ ဤသူသည်ငါအချိန်ဖို့အချိန်ကိုမျှဝေတံ့သောကိုယ့်ဘလော့ဂ်သော်လည်းငါ့ဘဝသင်ခန်းစာနှင့်အတွေ့အကြုံများ, မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီမှာနထေိုငျသူမြားပြည်သူ့အလေးအနက်ထားစဉ်းစားပေမယ့်သူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုမပြုစေခြင်းငှါ ကလူယူအေအီးနားလည်ကူညီပေးဖို့, များစွာသောအမှုအရာရှိစေခြင်းငှါနှင့်ပြောင်းလဲပြီဒါပေမယ့် core ကိုအတူတူရှိနေပါဦးမည်။ အဆောက်အဦးများဆောက်လုပ်ရန်နှင့်အဗဒ္ဒုန်ဒါပေမယ့်လက်သမားကျန်ကြွင်းနှင့်လက်သမားခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ပြည်နယ်၏လူဦး ...... များမှာပေမည်။
မြေတပြင်လုံးယူအေအီးအဘူဒါဘီ, ဒူဘိုင်း, Sharjah ကိုကြည့်ပါ
ရှည်လျားသောခရီးပြီးနောက်ငါသည်ငါ့ဦးတည်ရာကို Maroor လမ်းမကြီးအဘူဒါဘီရောက်ရှိခဲ့သည်။ ငါပတ်ဝန်းကျင်၏လေ့လာရေးအတွက်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်ကုန်, လူများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်။ အလှဆုံးအတွေ့အကြုံ, နောက်ပိုင်းမှာကျနော်တပြင်လုံးကိုယူအေအီးအဘူဒါဘီ, ဒူဘိုင်းအတွက်မြင်သောဧရိယာ၏ Masaajid ခဲ့သည် Sharjahအယ်လ် Ain နှင့် Ras Al-Khaima အတူတူကြော့ masaajid ရှိသည်။ အားလုံး masajid Adhan အတွက်တစ်ချိန်တည်းမှာဖတ်ပါသောအကောင်းဆုံးအရာ။ moazins ၏တင့်တယ်အသံလှပတဲ့နံနက်, မွန်းတည်, နေ့လည်ခင်း, ညနေပိုင်းနှင့်ညအတွက်ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကား azan အဖြစ်ဗေီမွကွေီးပျေါမှာအမြားဆုံးနူးညံ့သောစကားသံပုံရသည်။
Masaajid run ဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောအရာ အစိုးရက ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမဆိုဂိုဏ်း၏ဟောပြောခြင်းသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစီအစဉ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ငါနထေိုငျသညျ့နရောဧရိယာ Masjid ၏အီမာမ်အဖြစ်အီရတ်ခဲ့သူကအရမ်းကြင်နာပြီးနှိမ့်ချခဲ့သည်။ ငါကောင်းစွာဗေီနှင့်အတူကိုလညျးတတျကြှမျးမဟုတ်သော်လည်းသေးသူသည်ငါ့ကိုအခြို့သောအစ္စလာမ့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ်တစ်ဦးဟောပြောပွဲ ပေး. ငါ Arabic အဘိဓါန်သတိထားမဟုတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တအံ့တသြခဲ့သည်။ ငါသူသည်ငါ့ကိုဖို့ပြောနေခဲ့သည်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်တိုင်းစကားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ငါကကျွန်တော်တို့ကိုနှလုံးမှနှလုံးစကားပြောရန်ဖန်ဆင်းသောအစ္စလာမ့်ညီအစ်ကိုများခဲ့ထင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Masajid ဖွဲ့စည်းပုံမှာကအနန္တတန်ခိုးရှင်၏အိမ်တွင်ဟုခေါ်တွင်ခံရဖြောင့်မတ်သောကြောင့်အများကြီးကြော့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါရပ်ကွက်အတွင်းမှအမြိုးသားတို့သညျမွငျ သူတို့ကျောင်းအိတ်ယူဆောင်နှင့် Masjid ၎င်းတို့၏အိမ်စာကိုပြု၏။ ဒါဟာ Masajid ဆုတောင်းပဌနာအချိန်များတွင်မယ့်တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းအလယ်ဗဟို၏အခန်းကဏ္ဍကိုကစားကြောင်းဒါကြောင့်လန်းဆန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာယဉ်ကျေးမှုအားလုံးမွတ်စလင်နိုင်ငံများတွင်အောက်ပါကျိုးနပ်သည်။ အကြှနျုပျ၏အိမ်ရှင်ဥပုသ်လ၏လဿွာန်၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပွဲလမ်းသဘင်ဖြစ်ပါသည်, လူတွေသူတို့ရဲ့မေတ္တာနှင့်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ရက်ရောမှုတော်ကိုငါသွန်းလောင်းရာယူအေအီးအတွက်လှပသောလကြောင်းပြောပြတယ်။ ငါစိတ်ကူးနိုင် သူကအမှန်တရားပေမယ့်ဘာမျှအဘယ်အရာကိုပြောနေ.
အခုတော့စျေးကွက်မှ, အားလုံးစီစဉ်ထားအဆောက်အဦစျေးကွက်ကိုလည်းအပေါငျးတို့သအခြေခံလိုအပ်ချက်များသူ့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်အတူတညျဆောကျခဲ့သညျနှငျ့တူ အနီးအနားမှာနထေိုငျအသိုင်းအဝိုင်း။ ဘာဘာ, Baker ကကုန်စုံစတိုးဆိုင်နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းဆိုင်များ။ အားလုံးအသေးစျေးဆိုင်အထူးပါကစ္စတန်အာရှအသိုင်းအဝိုင်းက run နေကြတယ်, အိန္ဒိယနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်။ အဆိုပါအစားအစာများကို၏အရည်အသွေးအထူးကောင်းမွန်သည်။
ငါ့အဘို့ပျော်စရာအချက်ဇုန်ကစားခဲ့ပါတယ်, ငါသည်ငယ်ရွယ်အုပ်စုများကိုမြင်လျှင် အာရပ် ကွန်ယက်မှတဆင့်အချင်းချင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ရိုက်ကူးဂိမ်းကစားခြင်း။ အဆိုပါဂိမ်းငါ့အဘို့ဤမျှနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့သည်သျောအဘယျအကြှနျုပျကိုစိတ်ထဲတွင်သဘောကျဂိမ်းမှာသူတို့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့အော်ဟစ်ခဲ့ကြသည့်အခါ အာရဗီ ငါ့အဘို့ဤမျှလောက်ရယ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဂိမ်းဆိုင်တစ်ဆိုင်စာသားသူတို့ရဲ့ကြွေးကြော်သံအားဖြင့်တုန်ခါငါများသောအားဖြင့်ကသူတို့ကပျော်မွေ့သွားပါ။
ငါပျက်စီးကြောင်းသတိပြုမိအရာတစ်ခုမှာ အစားအသောက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အသီးအပွအသွင်အပြင်အားဖြင့်ကောင်းသောများမှာ ဒါပေမယ့်အားဖြင့်ဒါကောင်းစွာမဟုတ်မြည်းစမ်း။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ရှိသူများအထဲတွင်မြေဆီလွှာ၏တက်မရှိကြပါဘူး, ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ယူအေအီးတိုင်းကုန်သွယ်မှု၏အချက်အချာဖြစ်ပါသည် ဒါထုတ်လုပ်ထုတ်လုပ်သောသို့မဟုတ်ကမ္ဘာတဝှမ်းစိုက်ပျိုးထားသောပစ္စည်း၏ရရှိမှုကိုအလွယ်တကူကဒီမှာတွေ့ရှိခဲ့အပေါင်းတို့နှင့်ရိတ်သိမ်းန်းကျင်အချိုပွဲရှိခြင်းလွယ်ကူသည်မဟုတ်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်ခဲ့ ဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်အစားအစာထိန်းသိမ်းထားခံရဖို့။ သို့သော်အချိုရည်, ဖျော်ရည်, နို့ထွက်ပစ္စည်းအရည်အသွေးထိပ်တန်းကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်။
သံလွင်ဆီ, Khubuz, Houmous တိုင်းအိမ်၏ပုံမှန်အတိုင်းမုန့်ညက်ဖြစ်သလိုပဲ, တကအာဟာရမုန့်ညက်င် ယူအေအီး၏သဲကန္တာရကဲ့သို့သောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်ဖက်။ တစ်ဦးကမျိုးဆက်သစ်အမြန်အစားအစာဘာဂါနဲ့ Shawarmas ဆီသို့ပိုပြီးရှိုခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်မ AED 12 များအတွက်အလုံအလောက်ကောင်းသောမက်ဒေါ်နယ်ရဲ့မုန့်ညက်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဒါဟာကိုဝယ်ခြင်းငှါထိုက်တန်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးရိုးရှင်းသောမုန့်ညက် AED 20 အဘို့အသွားလျှင်အကျွန်ုပ်ကိုရန်, နေ့စဉ်မုန့်ညက်အပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပုံမှန်ထက်စရိတ်လုံလောက်ခဲ့ပါတယ်။
ယခုတွင်ငါသည် khubuz filis 75 ၏ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အပျော့သောက်ဘူဒါဘီအတွက် AED 1 ၏ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိရကဘာလဲ။ အတွက် ဒူဘိုင်းအတွက်ရည်ညွှန်း ငါဒူဘိုင်း၌ဝယ်ယူသည့်အခါနှစ်ဦးစလုံးပစ္စည်းများအတွက် fillis 25 add ပေးပါ။ Zohrat tul လေဗနုန်တောင်ပေါ်အစားအစာမျိုးစုံကြောက်မက်ဘွယ်အရသာထူးခြားဆန်းပြားခဲ့ပါတယ်, အိမ်ရှင်ထံမှကြည်နူးဖွယ်အားရစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာရေအလွန်ထူထပ်ခဲ့ပေမယ့်သေးကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲ။ ဒါဟာအဘူဒါဘီ၏အလုပ်အများဆုံးစားသောက်ဆိုင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကစားသောက်ဆိုင်၎င်း၏ကွင်းဆက်ရှိကြောင်းကြားပြောလေ၏ ယူအေအီးတလျှောက်လုံး။
အမ်းမရိတ်၏ Dubai Mall & Mall က
အဆိုပါမောလ်များဖြစ်ကြသည် ယူအေအီး၏အကြီးမားဆုံးသောဆွဲဆောင်မှုတွေထဲက။ သင်သည်တစုံတခုကိုဝယ်ချင်ကြဘူးဆိုရင်တောင်နေဆဲကြောင့်သင်တို့အဘို့အရာတစ်ခုခုရှိပါတယ်။ အကောင်းဆုံးနှင့်အဆင်ပြေပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူတိုင်းကုန်တိုက်အတွက်ရုပ်ရှင်ရုံရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ပျော်မွေ့ရှိအချိန်ဖြုန်းနိုင်ပါ။ ငါဒူဘိုင်းအတွက်လေကြောင်းလိုင်းရုံးခန်းသို့သွားရောက်ခဲ့ပြီးတာနဲ့, ငါမွန်းတည့်အချိန်ကရုံးအထိရောက်ရှိခဲ့သည်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးရုံးများတွင်အများစုလိုပဲသူကအဲဒီအခြိနျမှာအပိတ်နေ့လည်ပြန်ဖွင့်ဖို့ခဲ့တယ်, ငါ3နာရီစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ ငါထို့နောက်အရာကိုအံ့ဩခဲ့သည် ငါ Marina Mall သို့ ဝင်. တကယ်အချိန်သွားပြီဘယ်မှာမသိခဲ့ပါ, ဒါကြောင့်မျက်စိတစ်မှိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ကိုယ့်ရပ်နေကြ၏ဘာမျှမ ပြု. ပတ်ဝန်းကျင်၏ Hustle နှင့်စည်ကား watched ။ အဲဒီမှာဒူဘိုင်းအစဉ်အဆက်စကားတက် Sum မရနိုငျသောအရာတစ်ခုခုသည်သဘောပေါက်လာတယ်။
ထိုနေ့ရက်ကာလဧပြီလအဘူဒါဘီအတွက်ရာသီဥတုအခွအေနေရက်ပေါင်းလေထုချအအေးနည်းနည်းပူပေမယ့်ညနေပိုင်းတွင်ပင်လယ်လေပြေ၌ရှိကြ၏, အပြင်ဘက်ခံနိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနေရောင်ခြည်တက်လမ်းများမှသည်အထိသူတို့အိမ်များကိုစွန့်ခွာကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေသခံတွေကများအတွက် (Muwaatin) ရာသီဥတုမှာအားလုံးအနေနဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။
လုံခြုံရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်၏အဓိပ္ပာယ် ရပ်ရွာထဲတွင်ဤမျှလောက်ဖြစ်ခဲ့သည် ငါမဆိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲရုံ2နေ့ရက်ကာလ၌တစ်ဦးတည်းန်းကျင်ရုမ်းမင်းစတင်ခဲ့ကြောင်း။ ဒါဟာငါ့အအသိုင်းအဝိုင်းကြောင်းသလိုပဲ။ အသစ်တစ်ခုကိုလူတစ်ဦးကြိုဆိုသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုယူအေအီးတစ်လျှောက်လုံးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တည်ကြသည် ဖြစ်. , အငှားယာဉ်များ, ဗင်တိုင်း mode ကိုထခရီးသည်များအတွက်အဆင်ပြေ၏အမှတ်အသားဖို့ပဲမီတာတက္ကစီနည်းနည်းစျေးကြီးခဲ့ကြသည်ပေမယ် busses ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလိကတက္ကစီပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုပါကမည်သည့်ကုမ္ပဏီကပိုင်ဆိုင်တက္ကစီနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ချွေခဲ့, busses အငြိမ့်ကြီးမားလည်းအစွန်းရောက်ရာသီဥတု၏လိုအပ်သောအကောင်းဆုံးထိုင်ခုံများနှင့်အပြည့်အဝလေအေးပေးစက်နှင့်အတူရှိကြ၏။ ဗင်လည်းအဆင်ပြေခဲ့ကြရာတိုတောင်းသောအကွာအဝေးနယ်လှည့်အဘို့အမရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကြောင့်တင်းကျပ်သောယာဉ်အသွားအလာမူဝါဒများကြောင့်မည်သည့်ခရီးသည်စောဒကတက်ခဲ့ကွောငျးအလွန်ရှားပါးခဲ့ ယာဉ်သို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်ဝန်ထမ်းနှင့် ပတ်သက်. ။
ငါ၏အအထက်တွင်လှုပ်ရှားမှုများနှစ်ပတ်အတွင်းခုနှစ်, ငါယူအေအီးစေ, ငါ၏စိတ်ကိုထလုပ်သော ကြှနျတေျာ့ဒုတိယအိမ်မှာ။ လာမယ့်ဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ကျွန်မအကြောင်းကိုရေးသားပါလိမ့်မည် အလုပ်အဘို့အကြှနျုပျ၏အမဲလိုက်ခြင်း။
အတူချိတ်ဆက်ပါ: Naveed Khan က LinkedIn အပေါ်
ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက်လမ်းညွှန်များ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်များအတွက်ဂျော့ဘ်။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်ကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရရှိနိုင်သည်။